Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Jamaica na -ahụ arịrịọ siri ike n'aka ndị njem US
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
N'ịga n'ihu na -egosi nlọghachi njem nlegharị anya na Jamaica, ma American ụgbọ elu na Southwest ụgbọ elu yana Expedia na -achọpụta mmụba nke ndị njem ga -achọ n'ike n'izu na ọnwa ndị na -abịa.
American Airlines na Southwest Airlines tinyere Expedia achọpụtala nkwalite.
N'ọnwa Nọvemba, ndị ụgbọ elu Amerịka ga-eji Boeing 787-8 Dreamliner ọhụrụ ha mepere emepe maka ọrụ ndị a.
Ndị ụgbọ elu Southwest gwara na ọrụ ụgbọ elu ha na Montego Bay (MBJ) dị nso na ọkwa ndekọ afọ tupu oria ojoo.
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett kwuru. "Ntụkwasị obi na mmụba maka njem nlegharị anya Jamaica ka siri ike anyị ga-edobe usoro ahụike na nchekwa nchekwa Jamaica CARES nke ụwa, gụnyere Corridors Resilient anyị, iji hụ na oge oyi siri ike. ”
Iji gboo mkpa dị elu maka Jamaica, American ụgbọ elu ga -agbago elu ụgbọ elu ejiri na Montego Bay (MBJ) site na isi obodo ha Dallas/Fort Worth (DFW), Miami (MIA), na Philadelphia (PHL). Ruo ọnwa Nọvemba, ha ga na-eji Boeing 787-8 Dreamliner nwere nnukwu anụ ahụ maka ọrụ ndị a. Boeing 787-8 Dreamliner bụ otu n'ime ụgbọ elu kachasị ọhụrụ, na-enye ahụmịhe ụgbọ elu nwere ntụsara ahụ yana mgbakwunye ndị ọzọ maka ndị njem azụmahịa na akụ na ụba.
American ụgbọ elu bụ ụgbọelu kacha ebu ndị njem na -ejere Jamaica ozi. Ọ na-arụ ọtụtụ ụgbọ elu na-akwụsịghị akwụsị kwa ụbọchị na-aga site n'ọtụtụ obodo US gụnyere Miami (MIA), New York (JFK), Philadelphia (PHL), Chicago (ORD), Boston (BOS), Dallas/Fort Worth (DFW, na Ụlọ ọrụ ụgbọelu kwukwara na nso nso a na ha ga na-arụ ụgbọ elu na-akwụsịghị ugboro atọ Sun/Mon/Thu kwa izu site na Filadelfia (PHL) ruo Kingston (KIN) malite na Nọvemba 3.
Ka ọ dị ugbu a, Southwest Airlines agwala Minista Bartlett na ọrụ ụgbọ elu ha na-abanye na Montego Bay (MBJ) dị nso na ọkwa ndekọ afọ tupu ọrịa. Ọganihu a chọrọ nke ndị America na Ndịda Ọdịda Anyanwụ na -akwado site na Expedia, nke nwere data na -egosi abalị ime ụlọ na metrik na -eto metrik karịrị oge yiri ya na 2019.
Enyere mmelite ndị a n'oge nzukọ nke ndị na -anya ụgbọ elu na Expedia bụ otu n'ime usoro nzukọ a na ndị isi ụlọ ọrụ njem na -agafe n'ofe ahịa isi iyi Jamaica nke United States na Canada. Nzukọ ndị a bu n'uche ịchụpụ ndị mbata njem nlegharị anya n'oge na -adịghị anya na ịkwalite itinye ego na mpaghara njem nlegharị anya nke agwaetiti ahụ. Onye sonyere Minista Bartlett na nzukọ ndị a bụ Onye isi oche nke Board Jamaist Tourist Board, John Lynch; Onyeisi njem nlegharị anya, Donovan White; Senior Strategist na Ministry of Tourism, Delano Seiveright na osote onye isi njem nlegharị anya maka America, Donnie Dawson.
Jamaica ka na-emeghe maka njem ma na-aga n'ihu na-anabata ndị ọbịa n'enweghị nsogbu. Usoro ahụike ya na nchekwa nchekwa ya so na ndị mbụ nwetara nzere Safe Travels World Travel & Tourism Council (WTTC) nke mere ka ebe njem ahụ meghee njem n'enweghị nsogbu na June 2020. Àgwàetiti ahụ ekwupụtala n'oge na-adịbeghị anya mmepe njem ụgbọ mmiri na pasent iri itoolu nke atụmatụ akwadoro. ntinye ego nlegharị anya na-aga n'ụzọ.